Fanadihadiana momba ireo gidro/varika izay lasa biby fiompy eto Madagasikara (Ny fanadihadiana dia hita ao amin’ny tranonkala)
Ity fikarohana ity no natao dia mba hanangonana ireo tahirin-kevitra maro samihafa avy amin’ny daholobe momba ireo tranga niseho teny anivon’ny fiarahamonina mikasika ny fitazomana ireo gidro/varika ho toy ny biby fiompy. Anisan’ny antony hanatontosanay ity fikarohana ity ihany koa ny fahafantarana fa mety hahatratra hatramin’ny 28 000 ireo gidro/ varika izay heverina fa voatazona ho toy ny biby fiompy eto Madagasikara manodidina ny taona 2010 ka hatramin’ny fisasahan’ny taona 2013 lasa teo. Hatreto anefa dia mbola tsy fantatra mazava ny antony mahatonga ny fitazoamna azy ireny ho toy ny biby fiompy hatreto. Noho ny maha- voasakoajy ny gidro/varika ho anisan’ireo biby izay mitady ho lany tamingana maneran-tany dia ilaina ary tena manan-danja ny fahafantarana ny antony mahatonga ny gidro ho biby fiompy mba ho fiarovana azy.
Irinay tokoa raha toa ka afaka mameno ity fikarohana eto amin’ny tranonkala ity ianao amin’izay fotoana mety sy mampalalaka anao. Izy ity dia fanadihadiana an- tsitrapo ary natao mba hahafantarana ny antony hitazomana ny gidro ho biby fiompy.
Tsy zava-dehibe aminay ny hahafantarana ny mombamomba ny olona manome ny heviny mikasika ny fitazomana na fiompiana gidro ohatra: anarana. adiresy In’ny solontsainanao eny fa na ny toerana fonenanao aza. Na izany aza anefa dia afaka manome ny adiresy mailaka-nao ianao raha toa ka sitrakao ny handefasanay ireo vaovao farany momba ny fikarohanaianao rehefa tapitra ity fanadihadiana ity.
Raha toa ka mahatsapa fa voarahona na manana fanontaniana sy fitarainana ianao dia aza misalasala mireasaka amin’I Melissa Schaefer, PhD (Anthropology Department, University of Utah, m.schaefer@utah.edu, +1-801-957-4916).
Ho fanampin’izany raha toa ka manana fanontaniana mikasika ny zo-nao amin’ny maha mpandray anjara anao amin’ity fikarohana ity ianao na ihany koa fanontaniana na fitaraianana izay tsy tianao ho resahina mivantana amin’ilay mitondra ny fanadihadiana dia aza misalasala miresaka @ Institutional Review Board (IRB). Ny oniversiten’i UTAH IRB dia azonao antsoina amin’ny laharana +1-801-581-3655 na ihany koa afaka manoratra amin’ity adiresy mailaka ity: irb@hsc.utah.edu.
Mety haharitra mandritra ny 08-10 mn eo ho eo ny faharetan’ity fanadihadiana ity. An-tsitrapo ny fandraisana anjara amin’izany fa tsy ifanerena akory. Afaka misafidy ny tsy handray anjara ianao ary afaka misafidy ny tsy mamaly ny fanontaniana hatramin’ny farany ihany koa. Raha toa ka misy fanontaniana tsy tianao valiana dia azonao dinganina ihany koa izany ary tsy misy sazy na tombontsoa mety ho very.
Ny fandefasanao ireo zavatra voalaza rehetra amin’ity tranonkala ity dia midika fa manaiky an-tsitrapo tsy noterana ny handray anjara ianao. Ireo fampitan-kevitra rehetra narosonao dia misokatra ho an’ny rehetra. Na izany aza dia tsy hisy tahirin-kevitra hivoaka ka mety hiampangana olona iray. Ohatra tsy hisy hahita hoe taiza no toerana nahitanao gidro/varika iray nisy nitazona ho biby fiompy ny gidro ary koa tsy hamoaka eny fa na marika na anarana ahafantarana ny olona iray manana gidro/varika aza izahay.
Mankasitraka ary misaotra anao amin’ny fandraisanao anjara amin’ity fanadihadiana ity izahay. Ny fandefasanao ireo antontan-kevitra sy vaovao marobe dia aty aminay dia midika ho zava-dehibe ary hanampy anay hahafantatra ny antony hitazoman’ny olona ireny gidro/varika ireny ho toy ny biby fiompy.
​Hanomboka ny fanadihadiana